अगस्तमा सस्तो छुट्टिहरू - तपाईको आराम दिनको लागि सुझावहरू | Absolut यात्रा
अगस्तमा सस्तो छुट्टिहरु
हामी सोच्छौं कि रमाईलो गर्न सक्षम भइरहेको छ अगस्तमा सस्तो बिदा यो सपनाको अंश हो, तर होईन। त्यहाँ सँधै विकल्पहरू छन् जुन पर्याप्त किफायती हुन सक्छ र ती विचारहरूलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईंसँग अझै आफैंमा लिप्त हुने र गर्मी महिनाको उत्कृष्टताको आनन्द लिन बाहिर जान समय छ।
केवल चरणहरू वा सुझावहरूको एक श्रृंखला अनुसरण गरेर, हामी सही ट्र्याकमा हुनेछ हाम्रोमा सपना गन्तव्य पुग्न। अगस्टमा सस्तो छुट्टिहरू अब सपना मात्र हुनेछैन, तर अब तपाईले सोचेभन्दा कममा साचो पनि हुन सक्छ। अर्को के छ याद नगर्नुहोस्!
1 अगस्टमा सस्तो छुट्टिहरू कसरी पाउने, आरक्षण
2 कम माग भएका गन्तव्यहरू खोज्नुहोस्
3 पैसा बचत गर्न खाद्य विकल्पको साथ आवास
4 समूह साझेदारी खर्चमा यात्रा गर्नुहोस्
5 स्पेनमा कुन ठाउँहरू भ्रमण गर्ने?
6 तपाईंको गन्तव्यको वरिपरि पुग्नको लागि कार वा सार्वजनिक यातायात?
अगस्टमा सस्तो छुट्टिहरू कसरी पाउने, आरक्षण
हामीले लिनु पर्ने पहिलो चरण भनेको खोज इञ्जिनमा जानुहोस् र मितिहरू र गन्तव्यहरू छनौट गर्न छनौट गर्नु हो। यस तरिकाले, हामी सबै उपलब्ध विकल्पहरू देखाइनेछौं। तर अगस्ट महिनामा बिदाको लागि हेर्न यति सजिलो हुँदैन। तसर्थ, उत्तम वेबसाइटहरूको चयन गर्न जहिले केहि पनि छैन र सँधै ध्यान दिएर बिडिंगमा परिवर्तनहरू त्यो देखा पर्न सक्छ। जब तपाईं विमान वा होटेलको लागि एकदम उचित मूल्य देख्नुहुन्छ, यो तपाईंको समय हो। थोरै समयका साथ आरक्षण गर्नु उत्तम हुन्छ, किनकि हामी धेरै पैसा बचत गर्न सक्दछौं। तपाइँ पनी पनी निश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाइँको पाखमुर्चे रिजर्भेसन छ र ठूलो दिन नआउन्जेल तपाई धेरै शान्त वा शान्त हुनुहुनेछ।
कम माग भएका गन्तव्यहरू खोज्नुहोस्
यदि हामी धेरै पर्यटन स्थलहरुमा जान जिद्दी गर्दछौं, यो स्पष्ट छ कि मूल्यहरु अझ बढि बढ्नेछ। तसर्थ, दृश्यको परिवर्तनको लागि रोज्नु उत्तम हो, तर सबै तरिकाले। हालको बिरूद्ध जानको लागि केहि पनि छैन तर सधैं हामी के गर्न रुचाउँछौं भन्ने कुरामा रमाउँदै। त्यस्तो क्षेत्र छनौट गर्नुहोस् जुन यति पर्यटन छैन, साना शहरहरू वा सायद समुद्री तटको सट्टा पहाडहरू। निस्सन्देह, उच्च तापक्रमको साथ, यदि तपाईं समुद्र तट चाहनुहुन्छ भने, ती मानिसहरूलाई खोज्नुहोस् जुन सामान्य जनताबाट टाढा छन्। तपाईं अनस्पेल्ड प्रकृतिको आनन्द लिनुहुनेछ र यो वास्तविक खोजी हुनेछ। त्यहाँ जहिले पनि अधिक किफायती र मूल विकल्प हुन्छ ताकि तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
पैसा बचत गर्न खाद्य विकल्पको साथ आवास
यो जहिले पनि हेर्ने कुरा हो, तर धेरै अवसरहरूमा आवास आरक्षण गर्न सक्षम हुनु र आधा बोर्ड वा पूर्ण बोर्ड यो यसको लागि मेकअप हुन गइरहेको छ। बाहिर बाहिर खाँदा सस्तो लाग्न सक्छ तर अन्त्यमा हिसाब गरेर, हामी एक राम्रो चुटकी मिस गर्नेछौं। यदि तपाइँसँग छनौट छ भने, लजिंग प्लस फूड छनौट गर्न प्रयास गर्नुहोस्। अन्यथा, तपाईं जहिले पनि एउटा अपार्टमेन्ट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन एउटा भान्छाको घर हुन्छ र यसैले यसमा मुख्य खाना तयार गर्न सकिन्छ। यो सँधै सस्तो हुनेछ!
समूह साझेदारी खर्चमा यात्रा गर्नुहोस्
यो सत्य हो कि यो सधैं गर्न सकिदैन र हामी त्यो बुझ्छौं। तर अझै, यो दिमागमा राख्नको लागि एक विचार हो। किनकि यदि तपाई जोडीमा जानुभयो भने तपाई अरु जस्तो हुनुहुनेछ खर्च वितरण गर्नुहोस् र यो सँधै सहयोगी हुन्छ। उही तरीकामा, तपाईं साच्चै सस्तो आवासको विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं समुद्र तटमा दिन खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। वा, अपार्टमेन्टको विषयवस्तु अझै पनि अधिक लाभदायक हुनेछ र थप रूपमा, यसमा खाना बनाउनेछ। पक्कै पनि यस तरिका तपाईं वृद्ध वयस्क लिप्त गर्न सक्नुहुन्छ!
स्पेनमा कुन ठाउँहरू भ्रमण गर्ने?
सायद यस बर्ष तपाई हाम्रो देश मा रहन र हामीलाई थाहा छ ती क्षेत्रहरु मा जान चाहानुहुन्छ, तर सायद व्यक्तिगत रुपमा नहुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ गर्मीमा थोरै कूलर भएको सोच्दै उत्तरी क्षेत्र सधैं विशेष हुन्छ।
स्यान जुआन डे गजाटेलुगाट्से: क्यान्टाब्रियन सागरमा रहेको एउटा टापु, विशेष गरी बास्केट कन्ट्रीको बर्मेओमा। यो पहुँच गर्नका लागि, तपाईंसँग चरणहरू छन् जुन सधैं नवौं शताब्दीको हेरिटेजलाई रमाउन पार गर्नुपर्दछ, जुन यसको चरम विन्दुमा छ। एक परिकल्पना क्षेत्र!
Cies टापु: गलिसिया सबै उनको जादुई ठाउँहरूको सेट हो। जहाँ प्रकृतिले समुद्रलाई भेट्छ र हामीलाई यस जस्तो भव्य क्षेत्रहरू छोड्छ। यो सेस टापुहरू हो, जहाँ हामी प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो समुद्री किनारहरूको देख्छौं। तिनीहरू उच्च मागमा छन् र ग्रीष्म moreतुमा अधिक, तर यो लायक छ।
कोभाडong्गाका तालहरू अस्टुरियसमा: अवश्य। अस्टुरियस का परिदृश्यहरू जुन हामी भुल्न सक्दैनौं। Covadonga ती मध्ये एक हो। तपाईं एक ठूलो इन्फ्लक्स पाउनुहुनेछ, तर तपाईं जहिले पनि अर्को नजिकको क्षेत्रमा बस्न र नजिकैका शहरहरूमा भ्रमण गर्न जान सक्नुहुन्छ, क्याang्गस दे ओन्स वा रिबाडेसेला भ्रमण गरेर।
Ubansa र Andía प्राकृतिक पार्क नाभरामा: जहाँ प्रकृतिले तपाईंलाई पहिलो क्षणबाट स्वागत गर्दछ।
León को पुरानो क्षेत्र: फुर्सत र वाणिज्य दुबै यसमा एकसाथ आउँछन् र पाठ्यक्रममा, यो अन्य आवश्यक वस्तुहरू र लिनुपर्ने ठाउँ हो।
त्यसैले बार्सिलोना मा सीटहरु जस्तै Giraa वा मोन्टसेराटमा बेसाली, तिनीहरू पनि उत्तम ठाउँहरू हुन् तपाईंको छुट्टीको समयमा रमाईलो गर्न। मालागा वा अल्मेर्वा र उनीहरूका बिभिन्न शहरहरू बिर्सन बिना, हामी त्यहाँ केही बढी तातो खर्च गर्दछौं। तपाईका लागि प्रतीक्षा गर्ने त्यहाँ सँधै राम्रो ठाउँ हुनेछ।
तपाईंको गन्तव्यको वरिपरि पुग्नको लागि कार वा सार्वजनिक यातायात?
सत्य यो हो कि यदि तपाईं कारलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुभयो भने अझ राम्रो। पहिले किनभने तपाईं आफ्नो टिकटमा बचत गर्न लाग्नुभएको छ र त्यसपछि किनभने तपाईं स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। त्यसोभए, कार विचार गर्नका लागि पहिलो विकल्पहरू मध्ये एक हो। तर यदि यो सम्भव छैन भने, जुनसुकै कारणले, त्यसो भए सार्वजनिक यातायात दोस्रो हो। हो, यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामीले लामो कुर्नु पर्ने हुन्छ, जसले हामीलाई त्यति सान्त्वना वा लचिलोपन प्रदान गर्दैन, तर यो सस्तो हो। दुबै मेट्रो र बस दुबै ठाउँहरूमा जाने उत्तम विकल्पहरू छन्। किनकि हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि अगस्टको उच्च तापक्रम धेरै बढ्नको लागि अनुकूल छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अगस्तमा सस्तो छुट्टिहरु
स्यानट्यान्डरमा के हेर्ने
ला हर्मिडा गोर्जे